एक चिन्ह जो परमेश्वरले हामीलाई भविष्यबारे बताउन सक्नुहुन्छ - हातमा मा रेखा धेरै विश्वास गर्छन्। कसैले यो सबै अन्धविश्वास र pseudoscience Palmistry भनिन्छ हो सोच्छ, र कसैले निष्कर्ष ड्र र आफ्नो भाग्य समायोजन बनाउँछ। अधिकांश मानिसहरू आफ्नो रुचि हो जीवन, को लाइन उनि लगभग सबैको मा मौजूद रूपमा, भाग्य र मन। तर यो बताउन सक्नुहुन्छ के को मात्र एउटा सानो अंश हो Palmistry हात। बच्चाहरु को लाइन, विवाह पनि अध्ययन गर्न ठूलो चासो छ। र यो चासो मात्र होइन जवान र अविवाहित बालिका, तर पनि कारण अलग गिर जो लागि पहिलो संघ गर्नेहरूलाई छ। तर पर्याप्त शब्दहरू, यो अभ्यास गर्ने सार्न समय।
हात मा बाल रेखा, जहाँ छ?
सुरुमा "बेन्चमार्क" आफ्नो हात फेला पार्न। प्रत्येक हात मा सानो औंला अन्तर्गत छ पारा पहाडी - यो क्षेत्र हाम्रो सुरूवात बिन्दु हुनेछ। अब हृदय को लाइन पाउन गरौं। यो सानो औंला को दिशा मा मध्य र सूचकांक औंला र टाउको को आधारमा बीच स्रोत। सामान्यतया, यो गुना एकदम स्पष्ट व्यक्त गरिएको छ, र यसैले गल्ती गर्न कठिन हुनेछ। यसलाई जहाँ ठीक बच्चाको हात मा लाइन छ पारा पहाडी सीमित। मानिसहरू मा, त्यहाँ सामान्यतया कुनै संकेत छ, तर यहाँ महिला हामी खोजिरहेको छ कि सिर्फ एक चिन्ह हो। साना औंला को आधार र अन्त बीच हृदय को लाइन विवाह एउटा सानो लाइन छ। यसको परिभाषा र लम्बाइ अनुसार सम्बन्ध र विवाहको बल र शक्ति बारेमा निष्कर्षमा बनाउन सक्छ। यसलाई देखि ठेस, साना औंला को दिशा मा, एक वा बढी ड्यासहरू विस्तार हुन सक्छ। यो आफ्नो हातमा बच्चाको लाइन हो। एक गहिरो शिकन भने, यो एक छोरा portends, र यदि राम्रो - हामी एक छोरी आशा गर्नुपर्छ।
बच्चाहरु लाइन बताउन सक्नुहुन्छ अरू के?
धेरै चासो छ कि एउटा प्रश्न - "कुन हात प्रेतविद्यासम्बन्धी गर्न?"। उहाँले आफ्नो जीवनमा हासिल गर्न सकेन के - Palmists दाहिने एक व्यक्ति फेरि गर्न किस्मत छ के देखाउँछ, र बायाँ बताए। हामी दुवै हात मा चिह्न तुलना भने, तपाईं कहाँ उपलब्धिहरू छन् हेर्न सक्नुहुन्छ, र जहाँ अंतराल। हात मा बाल रेखा भविष्यमा छोराछोरीलाई संख्या बारेमा, तर पनि अनुमानित यो आनन्दित घटना हुनेछ जो, आफ्नो जीवन को अवधि मा मात्र होइन बताउन सक्छ। यसो गर्न, तपाईं मानसिक पहाडी तीन बराबर खण्डहरूमा मा पारा को माथिल्लो सीमा गर्न हृदयको लाइन बाट दूरी विभाजन गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक लगभग 25 वर्ष पारस्परिक रहेको छ। अब यो एक ड्यास वा हाइफन बच्चा विवाह हुन्छ ती साइटहरु जो हेर्न, र उपयुक्त निष्कर्ष आकर्षित रहनेछ। केही nuances पनि छन्:
वैवाहिक लाइन मा छ जो एक बच्चा आफ्नो हात को किनारा नजिक स्थित छ, पहिले जस्तो देखिन्छ।
प्रत्येक अन्य गर्न नजिक बच्चाहरु को लाइन, कम समय शेयर आफ्नो जन्म, को टाढा लाइन, को अब को अन्तराल प्रबन्ध छन्।
वी आकारको गुना जोडाहरू को घटना भविष्यवाणी गर्छ।
वेभी गुना - स्वास्थ्य समस्या को एक चिन्ह।
हामी बच्चा लाइन आफ्नो भाइबहिनीको भन्दा अलिकति लामो हुनेछ प्रेम गर्नुभयो।
को चिन्ह ठाडो तर विवाहको लाइन एउटा कोण मा छैन भने, यो आमाबाबुले संग एक सम्भव भावनात्मक अलगाव को चेतावनी दिन्छ।
बच्चाहरु crease वर्ग देखा भने - यो बच्चा जीवनमा एउटा प्रतिकूल अवधि दुर्घटनामा वा रोग बाट उत्पन्न सक्ने बाँचे थियो भने छ। र जीवन मा पहिले विवाह को लाइन, गर्न nearer को मार्क यो घटना के।
Lin: नाम को अर्थ र यसको मालिक को प्रकृति
Alexandrite को अचम्मको गुण - पत्थर विधवा
13, शुक्रवार। भयावह के छ दिन ल्याउँछ छ?
लोडर को लीज
"लामखुट्टे बिरुद्ध उपचार क्षेत्रमा?" - राम्रो प्रश्न!
ओरिगेमी "गुलाब": विधानसभा योजनाहरु
सर्वश्रेष्ठ चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्ड: समीक्षा, मूल्याङ्कन, वर्णन र समीक्षा
यो एन्टिबायोटिक लिदा रक्सी पिउन गर्न सम्भव छ?